ENGLISH FOR SUCCESS: 2008
i.e. and e.g ၏ခြားနားချက်များ
e.g. ဆိုသော စကားလုံးမှာ “ exempli gratia ” ဆိုသော စကားလုံးမှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဗမာလို အဓိပ္ပါယ်ပြန်ရရင်တော့ “ဥပမာအားဖြင့်” လို့ဆိုလိုနိုင်ပါတယ်။
For example: "I like fast cars, e.g. Ferrari and Porche
အမြန်ကားတွေကို ကျွန်ုပ် နှစ်သက်သည်။ ဒီ စာကြောင်းမှာ နှစ်သက်မိတဲ့ ကားနှစ်မျိုးနှစ်စားကို e.g. Ferrari and Porche ဟုရေးထားပါတယ်။ ဒီဥပမာက ရိုရိုးလေးပါ။ ဥပမာအားဖြင့်ဆိုပြီး ကိုယ်နှစ်သက်ရာ အမျိုးအစားကို ဖော်ပြသွားခြင်းပါတယ်။
i.e. ကတော့ “id est” ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ “that is” ပေါ့။ ကိုယ်ရှင်းပြနေတဲ့ စာပိုဒ်ထဲကားနေ ပြန်ညွှန်းပြခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။
ဒီအပေါ်က ဥပမာလေးကို ကြည့်ရင် သိသာနိုင်ပါတယ်။ အမြန်ကားတွေကို သဘောကျတယ်။ “i.e.” က အဲ့စာကြောင်းလေးမှာ ဘယ်အမြန်ကားမဆို ညွှန်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရောတတ်တာလေးတွေကို တတ်သလောက် မှတ်သလောက် စုစည်းတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆင်ပြေကြပါစေနော်။
Posted by Chaos at 11:05 PM3comments:
အင်္ဂလိပ်လူမျိုး တစ်ချို့ ယုံကြည်ထားတာက ize နဲ့ဆုံးတဲ့ စကားလုံးတွေ...... ဥပမာပြောရရင် " organize " ။ အဲ့ဒါကို အမေရိကန် စာလုံးဆိုပြီးယူဆထားပြီး တကယ့် စာလုံးပေါင်း အမှန်က " organise" ဖြစ်ရမယ်ပေါ့။
Oxford University က computerize, capitalize, capsize, organize, organization, privatize, publicize, realize အစရှိတဲ့ စာလုံးတွေမှာဆိုရင် ize နဲ့ဆုံးသင့်တယ်ပေါ့။
analyse, advertise, advise, arise, compromise, disguise, despise, enterprise, exercise, merchandise, revise, supervise, surprise အစရှိတဲ့ စာလုံးတွေကိုတော့ ise နဲ့ဆုံးရမယ်ပေါ့။
Concise Oxford Dictionary မှာ ရှာမယ်ဆိုရင်တော့ နှစ်မျိုးလုံး သုံနှုန်းထားတာ တွေ့နိုင်တယ်။
e.g., 'realise' or 'realize', 'organise' or 'organize' ။ တစ်ချို့ စာလုံးတွေကို ကျပြန်တော့လည်း
'analyse' = British English, 'analyze' = American English ဆိုပြီး ခွဲထားပေးတာရှိတယ်။
ဒါပေမယ့် ise နဲ့ ize စာလုံးပေါင်းနဲ့ ပါတ်သက်လို့ ဒီအောက်က အချက်လေးတွေက ထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။
Noun and verb: စာလုံးတစ်လုံးထဲကပဲ Noun ကိုရော၊ Verb ကိုရော ကိုယ်စားပြုပြီး စာလုံးပေါင်းလို့ရမယ်ဆိုရင် ise ကိုသုံးတယ်။ (like “exercise”)
Pronunciation: ဥပမာ စာလုံးတစ်လုံး -eyes (အိုင်း) လိုအသံမထွက်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင် ise ကိုသုံးတယ်။ ဥပမာ အားဖြင့် “promise”
Stem: နောက်ပြီး Latin, Greek စာလုံးက ဆင်းသက်လာတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာလုံး မှာ is နဲ့ဆုံးတယ်ဆိုရင် ise ကိုသုံးတယ်။ ဥပမာ vis နဲ့ဆုံးတဲ့ စာလုံးတစ်လုံးဆိုပါစို့။ ဒါဆိုရင် သူ့ကို "televise" ဆိုပြီးတော့သုံးပါတယ်။
* အခုအပေါ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အချက်နဲ့မကိုက်ညီတဲ့ စာလုံးတွေကိုတော့ ize သုံးတယ်။ *
တော်လွန်းတတ်လွန်း၍ ဆရာလုပ်နေခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဆက်လက်သင်ယူရင်း၊ လေ့လာရင်း၊ အသုံးတည့်မည် ထင်သော သင်ခန်းစာများကို မျှဝေပေးခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Chaos at 12:32 AM No comments:
Posted by MELODYMAUNG at 4:11 AM4comments:
ကဏန်း - squid
လုလုမီးဖိုချောင်က မလာတာ လို့ ထင်မိတာပဲ။ (မေ့နေပီ ဘယ်ကလဲဆိုတာ)
Posted by MELODYMAUNG at 10:10 PM No comments:
Labels: MelodyMg, vocabulary
သိုးကလေ (Poem of Bagan Period) မြန်မာ+အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်
Posted by mm thinker
Posted by MM Scholar at 12:00 AM 1 comment:
Labels: MMThinker, Poem, Translation
To make use of (someone or something) in suchaway as to benefit oneself
တစ်စုံတစ်ခု (သို့) တစ်စုံတစ်ရာ ကိုအသုံးပြု၍ မိမိအတွက် အကျိုးအမြတ်ရှိအောင် ပြုလုပ်ခြင်း
e.g., She was so kind and generous that people tended to take advantage of her.
လူတွေက သူမ၏ ကြင်နာတတ်မှု၊ သဘောကောင်းမှု အပေါ်တွင် အမြဲ အမြတ်ထုတ်ဖို့ အားထုတ်ကြံစည်နေသည်။
So that the good points are easily seen:
ကောင်းကွက်များကို အလွယ်တကူ မြင်သာခြင်း။
e.g., The evening suit showed off his tall elegant figure to advantage.
ညနေခင်း ၀တ်စုံက သူရဲ့ မြင့်မားတဲ့ အရပ်နဲ့ ရည်မွန်တဲ့ ပုံစံကို အလွယ်တကူ ပေါ်လွင်စေခဲ့တယ်။
The situation etc resulting from an important, especially unpleasant, event:
အရေးကြီးသော အဖြစ်အပျက်၊ အထူးသဖြင့် စိတ်မချမ်းမြေ့ဖွယ် ကိစ္စများ၊ ဖြစ်ရပ်များမှ ရရှိလာသော အခြေအနေတစ်ခု
e.g., The country is still recovering from the aftermath of the war.
နိုင်ငံ၏ အခြေအနေသည် စစ်ပြီးကာလမှ နလံပြန်ထူနိုင်ရန် အားထုတ်နေရဆဲဖြစ်သည်။
To be looking for or hoping to be given something:
တစ်စုံတစ်ခုကို ရှာဖွေခြင်း၊ တစ်ခုခုရရှိရန် မျှော်လင့်ချက်ထားရှိခြင်း။
e.g., The police are after him; What are you after?
ရဲသားများက သူ့ကိုလိုက်ရှာနေကြတယ်။ မင်းက ဘာကိုလိုက်ရှာနေတာလဲ?
To be inaposition where one has to deal with very severe, often apparently impossible difficulties:
အခက်အခဲ၊ ဒုက္ခများကို ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရခြင်း။
e.g., We have only just enough money to live on now, and if my husband loses his job we’ll be up against it.
အခုလက်ရှိငါတို့မှာ ငွေလက်ကျန်နဲနဲလေးနဲ့ နေနေရတယ်. တကယ်လို့များ ငါ့ခင်ပွန်းသာ သူ့အလုပ်ကို လက်လွှတ်လိုက်ရရင် ငါတို့တော့ ကျဉ်းထဲကျပ်ထဲမှာ ဒုက္ခပင်လယ်ဝေပြီ။
To become old enough to be considered legally an adult
အရွယ်ရောက်လာပြီ ဖြစ်ကြောင်းကို တရားဝင်သတ်မှတ်ခံရခြင်း။
e.g., My uncle will look after my inheritance until I come of age.
ကျွန်တော့ ရပိုင်ခွင့်အမွေများကို ကျွန်တော်အရွယ်မရောက်ခင် အထိ ဦးလေးက တာဝန်ယူထိန်းသိမ်းထားမည်။
To provide help and encouragement in some
တရားမ၀င်သော၊ ဆိုးဝါးသော လုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက် အကူအညီပေးခြင်း၊ အားပေးအားမြှောက်ပြုခြင်း။
e.g., His wife aids and abets him in his dishonest deeds.
သူ့ရဲ့ မရိုးသားတဲ့ အပြုအမူများ၊ လုပ်ငန်းများကို သူ၏ ဇနီးက အကူအညီပေးလျက်ရှိသည်။
Posted by Chaos at 1:53 AM No comments:
Labels: chaos, Idioms
Dictionary ကိုအသုံးမပြုပဲနဲ့Vocabulary များ၏အဓိပ္ပာယ်တွေကို စာကြောင်းတွေကနေခန့်မှန်းပြီးတော့ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသုံးလုံးထဲမှအနီးစပ်ဆုံးစာလုံးကိုရွေးပါ။
1) dialog - n
The movie was shown with English subtitles because all its dialog was in French.
At the PCA meeting last night,adialog between parents and the faculty helped to clear up some differences between them.
Dialog means- a.atitle b.aconversation c. an action
2) erratic - n
Children's eating habits are erratic. One day they'll barely eat, and the next they'll eat enough for three.
The driver ahead of me was erratic - he kept changing his speed and his lame.
Erratic means- a. noisy b. healthy c. irregular
3) extensive - adj
Selina did extensive research for her paper - it took her several weeks.
To save the wounded police officer, doctors performed extensive surgery that lasted for hours.
Extensive means- a. done quickly b. risky c. large in amount
4) forfeit - v
The basketball players were upset when the team bus broke down and they had to forfeit an important game.
If Phil damages his parents' car againg, he will forfeit the right to drive more.
Forfeit means- a. to give up b. to win c. to ignore
5) fortify - v
The night before runningamarathon, Elsa fortifies herself by eatingalarge plate of pasta.
The builders plan to fortify the old tower with steel beams.
Fortify means- a. to relax b. to strengthen c. to prove
6) illuminate - v
Before electricity, streets were illuminated by gaslight.
On Halloween, we made our trick-or-treat rounds withaflashlight to illuminate the way.
Illuminate means- a. to lose b. to clean c. to light up
7) isolate - v
I thought I would enjoy isolating myself at the vacation cabin, but I soon felt lonely.
Freddy was suchatroublemaker that the teacher put his desk inafar corner to isolate him from the other students.
Isolate means- a. to protect b. to separate c. to recognize
8) refuge - n
A motorcycle offers no refuge in bad weather.
My boyfriend and I first met when we took refuge in the same doorway duringasudden rain.
Refuge means- a.ashelter b. transportation c.areason
9) reminisce- v
On their wedding anniversary, Lenny and Jean reminisced about their first date.
My father showed me his trophy and reminisced about his years asastar basketball player.
Reminisce means- a. to remember b. to forget c. to ask
10) urban- adj
Skyscrapers make for tightly packed urban populations. For example, some 16,000 people work in the Sears Tower in Chicago.
Gladys likes urban living because she grew up in the city, but Emilio, who grew up onafarm, prefers country life.
Urban means- a. country b. city c. national
1) dialog- B [ အပြန်အလှန်စကားပြော ]
2) erratic- C [ တစ်သမတ်တည်းမဟုတ်သော၊ အပြောင်းအလဲမြန်သော ]
3) extensive- C [ ကျယ်ပြန့်သော ]
4) forfeit- A [ လက်လွှတ်အဆုံးရှုံးခံသည် ]
5) fortify- A [ ခုခံနိုင်ရန် အခိုင်အခံ့ ပြုလုပ်သည် ]
6) illuminate- C [ မီးထွန်းသည် ]
7) isolate- B [ သီးသန့်ထားသည်၊ သီးခြားရှိစေသည် ]
8) refuge- A [ ခိုလှုံရာ ]
9) reminisce- A [ ပြန်စဉ်းစားသည်၊ စားမြုံ့ပြန်သည် ]
10) urban- B [ မြို့ပြနှင့်သက်ဆိုင်သော ]
1) To light up
2) To lose through some fault; to be forced to give up by way of penalty
3) Shelter; protection
4) Of or inacity
5) A conversation; the conversation between characters inastory, novel, or play
6) To separate from others
7) Large in space or amount
8) To strengthen
9) To remember and talk about the past
10) Not consistent
Posted by Winkabar at 7:35 PM No comments: